Coffee Cup for Car အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
အသင့်တော်ဆုံး ခွက်ကလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အဝိုင်းလေး ဖြစ်တာမို. ကားအတွင်း သုံးရတာ အဆင်ပြေပါမယ်။
Stainless steel ဖြစ်တာကြောင့် သံချေး မတက်နိုင်ပါ။
ကားရှိသူတိုင်းကို လက်ဆောင် ပေးဖို.လည်း သင့်တော်တယ်နော်။
သုံးခုဝယ်ရင် ၂သောင်းနဲ. ပေးပါမယ်။
အရောင် – အဖြူ၊ အမဲ
အမည်: Coffee Cup for Car